अहिले अर्थमन्त्री के कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ भने अब त साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन। राजश्व छैन भनेर उहाँ विलाप गरिरहनुभएको छ,’ महतले थपे, ‘कस्तो खाले विरोधाभाषसपूर्ण कुरा हो? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/अहिले अर्थमन्त्री के कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ भने अब त साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन। राजश्व छैन भनेर उहाँ विलाप गरिरहनुभएको छ,’ महतले थपे, ‘कस्तो खाले विरोधाभाषसपूर्ण कुरा हो?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई विरोधाभाषपूर्ण कुरा नगर्न आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले दैनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएपछि कांग्रेसले १५ दिनअघि आफैंले ल्याएका बजेटका हेर्न सुझाएको हो।
जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा रेल र पानीजहाजलाई बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कांग्रेसले त्यो अहिलेको प्राथमिकताविपरीत रहेको बताएको हो।
कोरोना प्रभाव अनुगमन गर्न कांग्रेसले बनाएको समितिका संयोजकसमेत रहेका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले रेल र पानीजहाज बजेटमा समेट्ने अर्थमन्त्रीले साधारण खर्च धान्न नसस्ने अवस्थामा पुगेको भन्नु दु:खद भएको बताए।
‘बजेट कस्तो आयो तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ। बजेटले पानीजहाज, रेलका कुरा गर्‍यो,’ सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महतले भने, ‘कोरोनाले जनता जीवनयापन कसरी गर्ने भन्नेमा छन्। यस्तो परिस्थितालाई प्राथमिकता दिएर बजेट आएन।’
सहमहामन्त्री महतले बजेटका प्राथमिकतालाई लिएर अर्थमन्त्री खतिवडाको आलोचना पनि गरे।
‘अहिले अर्थमन्त्री के कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ भने अब त साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन। राजश्व छैन भनेर उहाँ विलाप गरिरहनुभएको छ,’ महतले थपे, ‘कस्तो खाले विरोधाभाषसपूर्ण कुरा हो? एकातिर सरकार, त्यही अर्थमन्त्री रेल र पानीजहाजलाई यति-उति बजेट विनियोजन गरेको संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ अहिले मलाई चालु खर्च चलाउन पैसा छैन भन्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो? उसो भए रेल, पानीजहाज शीर्षकमा राखेका बजेट कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ?’
कोरोना महामारीका बेला जनता जीवनमरणमा हुँदा जीवन बचाउने र स्वास्थ्य तथा खानामा प्राथमिकता हुनु पर्ने भए पनि सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको उनले बताए।
‘लकडाउनका कारण बेरोजगारी बढेको छ। आर्थिक जीवन, पर्यटन र रेमिट्यान्स घटेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बजेटले कम्तिमा न्यून भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने होइन? जनताका दैनिक जीवन सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन? तर सरकार यसबारे बेखबर छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारलाई चालु खर्च धान्न कठिन भएको जानकारी गराएका थिए।
आर्थिक विधेयक २०७७ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अनिवार्य दायित्व धान्न सरकारलाई रुपैयाँको समस्या परेको बताएका हुन्।
‘अहिले हाम्रो मासिक अनिवार्य दायित्व ४० अर्ब छ। यो भनेको चालु खर्च हो जुन सरकारले जसरी पनि नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीलाई केही समस्या भइरहेको छ।
अहिले भन्सारबाट महिनामा १५ अर्बजति राजश्व उठिरहेको छ। त्योभन्दा न्यून आन्तरिक राजश्व छ। यसले ४० अर्बको दायित्व पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ खतिवडाले भनेका थिए।
सरकारलाई नगदको समस्या भयो: अर्थमन्त्री
अब रातमा झिलिमिली माइतीघर मण्डला (तस्वीरहरू)